Qawaaniinta aan caadiga ahayn iyo ogeysiiska ECG, waxa ay yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Apple Watch, dhowr
Waxaa jira hadal hayn badan oo ku saabsan shaqeynta cusub ee Apple Watch oo dhowr toddobaad uun ka hor timid Spain iyo waddamada kale ee Yurub iyo horeba wuxuu u ahaa jilaa dhowr cinwaan oo saxaafadeed sida uu "u badbaadiyey" dhowr qof dadka aan ka warqabin inay qabaan dhibaato dhanka wadnaha ah. Ogeysiisyada Qawaaniinta ee aan caadiga ahayn iyo ECG waa labadan shaqo ee cusub ee mararka qaarkood jahawareersan oo in badan oo aan weli ka warqabin.
Maxay yihiin Ogeysiisyada Xawaaraha aan caadiga ahayn? Waa maxay ECG? Sidee mid kastaa shaqooyinkani u shaqeeyaan? Moodalkaaga Apple Watch ma la jaan qaadi karaa midkoodna? Sidee loo fasiray natiijooyinka? Halkan waxaan isku dayi doonaa u sharax wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad si fiican ugu fahamto shaqooyinkan, aad u ogaato sida saxda ah ee aad ugu adeegsan karto oo aad u taqaanno sida loo turjumo si fiican xogta ay ku siinayaan.
1 Waa maxay fibrillation-ka jirka?
2 Maxay yihiin Ogeysiisyada Xawaaraha aan caadiga ahayn
3 Sidee Apple Watch ECG u shaqeeyaa
4 Had iyo jeer ka hubso dhakhtarkaaga
Waa maxay fibrillation-ka jirka?
Wadnuhu si caadi ah ayuu u garaacaa qaafiyad ahaan, laakiin waxaa jira cudurro sababa in laxanka lumo, waxaa loo yaqaan "arrhythmias". Waxaa jira noocyo badan oo ah arrhythmias, laakiin kuwa ugu caansan waxaa loo yaqaan "Fibrillation Atrial.". Waa nooc ka mid ah arrhythmia oo saameeya qayb aad u muhiim ah oo dadka ka mid ah, mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee jira ayaa ah in xaalado badan uusan siinaynin wax calaamado ah illaa ay dhibaatooyinku ka muuqdaan, kuwaas oo laga yaabo inay halis yihiin. Taasi waa, dadka qaarkiis waxay leeyihiin fibrillation-ka wadnaha (atrial fibrillation) mana garanayaan, iyadoo la ogaado oo keliya marka ay dhibaatooyinku soo baxaan.
Baadhitaanka cilladda wadnaha, baadhitaanka dhakhtarkaagu waa lagama maarmaan, kaas oo ay ku jiraan baaris dhammaystiran iyo ECG (electrocardiogram). Waana halkaan halka mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinka cudurkan oo adkeeya baaritaanka ay ka muuqato: dadka qaarkiis waxay u haystaan ​​si ku-meel-gaadh ah, waxay ku yeelan karaan hal dhibic laakiin maahan mid kale. Tani waxay keenaysaa daahitaan ku dhaca ogaanshahooda iyo sidaa darteed daaweyntooda.
Maxay yihiin Ogeysiisyada Xawaaraha aan caadiga ahayn
Shaqadani waxay ku cusbeyd Apple Watch dhowr toddobaad, waxayna ku habboon tahay dhammaan moodooyinka laga soo qaatay Taxanaha 1, taas oo ah, uma baahnid inaad haysato tusaalihii ugu dambeeyay ee aad ku adeegsan karto. Sideed u dhaqaajisaa? Waxaad u baahan tahay oo keliya taxanaha Apple Watch 1 ama ka dib oo la rakibay watchOS 5.2. Soo gal barnaamijka daawashada ee taleefankaaga iPhone-ka oo tag "My Watch> Wadnaha", halkaas oo aad ku arki doontid ikhtiyaarka "laxanka aan caadiga ahayn" si aad u hawlgeliso.
Waa shaqo otomaatig ah, uma baahnid inaad wax qabato, maxaa yeelay Apple Watch wakhti kasta oo cayiman ayaa qabsan doona garaaca wadnahaaga oo u arki doona inay qaafiyad tahay iyo in kale. Haddii ay dhacdo inay ogaato 5 laxanka habdhiska muddo aan ka yarayn 65 daqiiqo, waxaad heli doontaa ogeysiin kugu wargelinaysa xaqiiqadan. Haddii aad hesho ogeysiiskan, waxay u badan tahay inaad qabtid arrhythmia, maaddaama Atrial Fibrillation uu yahay arrhythmia ugu soo noqnoqda, waxay u badan tahay inay taasi sabab u tahay. Waa inaad u tagtaa dhakhtarkaaga si daraasad loo sameeyo si loo xaqiijiyo ama aan loo ogaan cudurka.
Shaqadani waa tii lagu qiimeeyay daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen jaamacadaha Stanford iyo Apple, oo leh natiijooyin dad badan ka yaabiyay. Kormeerka wadna garaaca wadnaha oo otomaatig ah ayaa lagu wargaliyay 0,5% kaqeybgalayaasha daraasada, qaar badan oo kamid ah kadib waxay aadeen dhaqtar daraasadooda, iyagoo gaaray baaritaanka Atrial Fibrillation. Laakiin waxaa jira xog laga soo qaatay daraasaddan oo mudan in la muujiyo.
Markuu bukaanku xirtay Apple Watch iyo balastar sameysay ECG isku mar, haddii uu helo ogeysiis ku saabsan laxanka aan caadiga ahayn ee 84% kiisaska, ECG waxay muujisay cillad aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, kuwa soo xirtay kaliya Apple Watch oo lahaa ECG la qabtay hal toddobaad ka dib markii la helay ogeysiiska, kaliya 34% waxay muujiyeen cillad aan caadi ahayn. Tan waxaa loo sharaxay maxaa yeelay sidaan bilowgiiba u sheegnay, Fibilillation-ka 'Atrial Fibrillation' wuu kala go'i karaa, marka markaad hesho ogeysiiska waad heli kartaa, laakiin saacado ama maalmo kadib way dhici kartaa inay lumiso.
Sidee Apple Watch ECG u shaqeeyaa
Shaqada ECG ee Apple Watch waxay kaabe u tahay ogeysiisyada laxanka. Wada jir waxay u noqdaan aalad ka saxsan tan Waxay waxtar weyn u yeelan kartaa dhakhtarkaaga marka la ogaanayo suuxdinta Atrial Fibrillation, sidoo kale waxay faa'iido badan u yeelan kartaa la socodka cudurkaMaaddaama ay kuu oggolaaneyso inaad ku sameyso ECG naftaada guriga, kaydiso oo aad tusto dhakhtarkaaga ama xitaa ugu dir email ama farriin deg deg ah.
Shaqadani ma aha mid otomaatig ah, waa inaad adigu iskaa u fulisaa, taas oo lid ku ah waxa ku dhaca ogeysiisyada habdhiska aan caadiga ahayn, iyo sidaan u sheegnay, kaliya Apple Watch Series 4 cusub ayaa awood u leh inay u fuliso sida watchOS 5.2. Weli ma hayno daraasad ka ballaaran tii aan horey u soo sheegnay, laakiin waxaa jira tijaabo caafimaad oo yar oo ay la socdaan 600 oo kaqeybgalayaal ah taas oo waxtarka Apple Watch ECG (hal hogaamiye) iyo ECG caafimaad (12 horseed) la barbardhigay. Daraasadda ayaa lagu soo gabagabeeyay in barnaamijka ECG ee Apple Watch uu muujiyay xasaasiyad dhan 98,3% marka la go'aaminayo fibrillation-ka wadnaha. Waa cabir muunad aad u yar, laakiin natiijooyinka waa rajo.
Tani waa halka ay xogta aan horey uga soo saarnay daraasadda Stanford ay muhiim u noqotay: Haddii ECG la qabtay isla waqtigaas in ogeysiiska la helay, 84% ee waqtiga baaritaanka Atrial Fibrillation la helay. Haddii ECG dib loo dhigo dhowr maalmood ogeysiis kadib, kaliya 34% ee waqtiga Fibrillation Atrial ayaa la ogaaday. Sidaa darteed, haddii aad haysato taxanaha Apple Watch 4 oo aad hesho ogeysiiska laxanka ee aan caadiga ahayn, waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo barnaamijka ECG ee Apple Watch-kaaga., maxaa yeelay suurtagalnimada in la ogaado Fibilillation-ka 'Atrial Fibrillation' ayaa ka sarreeya.
Had iyo jeer ka hubso dhakhtarkaaga
Ogeysiisyada Riwaayadda aan caadiga ahayn ama shaqada ECG ee Apple Watch midkoodna looguma talagalin inuu beddelo dhakhtarkaaga, Waxba kama dheeraan xaqiiqda. Haddii aad leedahay wax calaamado ah oo muujinaya cudurada wadnaha waa inaad u tagtaa dhakhtarkaaga xitaa haddii Apple Watch uusan waxba ogaan, iyo haddii aadan dareemin astaamo laakiin ogeysiisyada ama ECG ay kuu sheegayaan inaysan wax caadi ahayn, waa inaad sidoo kale dhakhtarkaaga si loo xaqiijiyo in dhibaatadaasi ay dhab tahay iyo in kale.
Si xun u qiimeynta shaqooyinkan Apple Watch maxaa yeelay waxay u baahan yihiin xaqiijin dhakhtar waa qalad, maxaa yeelay ujeeddadooda maahan. Yurub gudaheeda, qiyaastii 11 milyan oo qof ayaa qaba Atrial Fibrillation, oo aan ku darno kuwa aan weli la ogaan maxaa yeelay weli wax calaamado ah ma aysan arkin. Ujeedada Apple Watch, ogeysiisyada qaafiyadda ee aan caadiga ahayn iyo shaqada ECG ayaa ah in la yareeyo tirada dadka aan weli helin cudurka. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa la socodka dadka horeyba loo soo ogaadey cudurka, iyagoo siinaya macluumaad aad u faa'iido leh dhakhtarkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Qawaaniinta aan caadiga ahayn iyo ogeysiiska ECG, waxa ay yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan
Apple waxay shaqaaleysiisaa Arthur van Hoff si ay u horumariso mashaariicdeeda dhabta ah ee dhabta ah
Miisaaniyadda Apple Arcade waxay gaareysaa $ 500 milyan